Red Bull Air ကိုလူမျိုး2| APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Red Bull Air ကိုလူမျိုး 2
Red Bull Air ကိုလူမျိုး2APK ကို
Red Bull Air ကိုလူမျိုး2နာမည်ကျော်လေကြောင်းပြိုင်ကားမိုဘိုင်းဂိမ်းဖို့ထိခိုက်ရုံတင်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်နှုန်းမြင့်၏တစ်ဦးကပေါင်းစပ်နိမ့်အမြင့်များနှင့်အစွန်းရောက်တိမ်းကမိုဘိုင်းပေါ်တွင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အကောင်းဆုံးပျံယှဉ်ပြိုင်စေသည် - တပ်အားကစား၏တစ်ဦးက New Dimension ခံစားရသည်။
THE BEST နှင့်ယှဉ်ပြိုင်
ကမ္ဘာတဝှမ်းအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ Air ကိုလူမျိုးခရီးစဉ်အောက်ပါအတိုင်းတဲ့ကင်ပိန်းအတွက်မာစတာအတန်းအစားလေယာဉ်မှူးဖြစ်လာမှ Challenger ကနေတိုးတက်မှုကို။ အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကို ယူ. ဒေသတွင်းနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ multiplayer ပြိုင်ပွဲများတွင်ယှဉ်ပြိုင်။ အစစ်အမှန် Air ကိုလူမျိုးလေယာဉ်မှူးများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကစိန်ခေါ်မှုများ mode မှာ၎င်းတို့၏ချန်ပီယံလေယာဉ်ဆန့်ကျင်ပယ်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။
ထိကိုင်သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုစောင်း, သင်ဆုံးဖြတ်။ အလိုလိုသိထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုသင်တန်းများမှတဆင့်တစ်ဦးက high-performance ကိုလေယာဉ် piloting ၏စိတ်လှုပ်ရှားခံစားရသည်။ , အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဘဏ်နှင့် Red Bull Air ကိုလူမျိုးစင်မြင့်ပေါ်မှာအစက်အပြောက်ဝင်ငွေဒေါင်လိုက်အလှည့ဆွဲထုတ်။
အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းကစားနှစ်ဦးစလုံးပျော်မွေ့သင့်ရဲ့ရှေ့ပြေးကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ကြောင်း Modes သာအမျိုးမျိုးကနေရှေးခယျြနှင့်အဖိုးတန်သယံဇာတများကိုနှင့်အတူသငျသညျဆုချ။
သင့်ရဲ့လေယာဉ်ရုံထဲမှာ high-performance ကို, ပြိုင်ပွဲ-ညှိလေယာဉ်စုဆောင်း customize ။ ထို့နောက်တစ်ဦးချင်းစီထူးခြားသောသင်တန်း၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သူတို့ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်နှင့် configure ။ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့လေယာဉ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့တစ်အမှုထမ်းငှားရမ်း။
အံ့သြဖွယ်ဂရပ်ဖစ်သင့်မိုဘိုင်း screen ပေါ်မှာဘဝမှအစစ်အမှန်ကမ္ဘာနေရာများတွင်ဆောင်ခဲ့ရမည်။ က Indianapolis မောင်းပြိုင်ပွဲ၏ infield ဖြတ်ပြီး San Diego မှဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၏ရေသည်သို့မဟုတ်အသံဗလံအထက်တွင်ယူသွားတူဘာ, အတွေ့အကြုံများ။ 11 တည်နေရာနှင့် 500 + ကျော်လူမျိုးကိုဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူမြန်နှုန်းမြင့်ပြိုင်ကားများ၏စိတ်လှုပ်ရှားတွေ့ကြုံခံစား!
San Diego မှ, Indianapolis, Lausitzring, Chiba, ဘူဒါပက်, Ascot, ပီးလ်ဘာ့ဂ်, Las Vegas မှာ, Rovinj, Fort Worth နှင့်အဘူဒါဘီ ... သင့်အသက်တာ၏မြန်နှုန်းမြင့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်ထူထောင်ပြိုင်ပွဲတည်နေရာနှင့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Vista ကိုခံစားပါ။
သင့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်အသင်း၏အကူအညီဖြင့်ပြောဆိုချက်ကိုအောင်ပွဲ! တစ်ခုချင်းစီကိုအသင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကိုသင်မြန်မြန် finish ကိုလိုင်းပျံသန်းကူညီရန်ထူးခြားသောစွမ်းရည်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးကိုရန်သင့်ပျံအမြန်နှုန်းနှင့်တိကျကျွမ်းကျင်မှုကိုချွတ်ပြသ - ပြိုင်ပွဲနှင့်ဦးဆောင်၏သုံးမျိုးအတွက်အနိုင်ရပြိုင်ပွဲ!
•သီးသန့်ဒေသတွင်းပြိုင်ပွဲများ, အထူးရွေးချယ်ထားသည့်ဒေသများမှပွင့်လင်း။ သင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာတစျခုအတှကျအပြန်စစ်ဆေးနေထားပါ။
•လူမျိုးအချိန်မရွေးကမ္ဘာတစ်ဝန်းရဲ့ Virtual ပြိုင်ပွဲများအတွက်တစ်ပြိုင်ပွဲပြေးအမြဲရှိပါတယ် - သင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကတခြားထိပ်တန်းထစ်လေယာဉ်မှူးဆန့်ကျင်နှိုင်းယှဉ်ပုံကိုကြည့်ပါ။
ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဂရပ်ဖစ်များနှင့်မယုံနိုင်စရာမြန်နှုန်း။ သင့်မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောတစ်ခုမှာတစ်လောကလုံးဂိမ်း။ သင်သွားလေရာရာ၌အဆိုပါ Red Bull Air ကိုလူမျိုး၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာအောင်ပွဲခံစားရသည်။
Red Bull Air ကိုလူမျိုး2အောက်ပါကိရိယာများပေါ်တွင် run ပါလိမ့်မယ် ...
နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်: 1GB Ram
နိမ့်ဆုံးက Android OS ကို: 5.1 သို့မဟုတ်အသစ်များ
နိမ့်ဆုံး screen resolution ကို: 800 × 480
2015 ထုတ်လုပ်မှာ Android device ကို
သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာကြုံတွေ့ရပါလျှင် http://www.redbull.com/en/games/stories/1331683785420/red-bull-air-race-%E2%80%93-the-game-contact-form မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
ဤလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲအားဖြင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီလက်ခံပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်လစီထွက်သတ်မှတ်ထားသောကြောင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်, သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်လွှဲပြောင်းရန်သဘောတူညီ:
287.57 ကို MB